""Waare Oo Buulo Burde u tegaya Xiisad ka Taagan Degmadaas"" - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
“”Waare Oo Buulo Burde u tegaya Xiisad ka Taagan Degmadaas””
November 27, 2019 8:47 AM - Written by Warbaahinta AlloolNews BO
Degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka bilaawday kulamo la doonayo in lagu xaliyo xiisad ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyey Maamulkii degmadaas,kaas oo maalmahaan ka taagan degmadaas.
Shalay waxaa Buulo Burde gaaray Wafdi uu horkacayo la taliyaha sare ee Madaxweyanaha Hir-Shabeelle Maxamed Faarax Makaraan oo uu qeyb ka yahay Wasiir ku xigeenka beeraha iyo waraabka Hir-Shabeelle Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare.
Wararka qaar ee la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Xubnaha wafdiga ay horudhac u yihiin Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaah Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku wajahan Buulo Burde si xal looga gaaro khilaafka Maamul ee ka taagan degmadaas.
Xubnaha wafdiga ee shalay gaaray Buulo Burde ayaa waxaa ay kulamo la qaadanayaan Odayaasha dhaqanka magaalada Buulo Burte oo dhankooda ay dhawaan ka horyimaaday maamul cusub ee loo magacaabay degmadaas.